Nata Blog : Blaogy avy any ambanivohitr’i Afrika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Oktobra 2007 9:15 GMT
Ny tantaran'ny Blaogin'ny tanàna Nata na the Nata Village Blog dia isan'ireo tantara lafatra momba izay hery sy ako ateraky ny fandraisan'ny vahoaka avy any Afrika anjara fitenenana eto amin'ny sehatry ny fampahalalam-baovao. Ity blaogy iray ity dia any amin'ny tanàna ambanivohitra antsoina hoe Nata any Bôtsoana. I Nata dia tanàna misy mponina eo amin'ny 5'000 eo ho eo eny amin'ny moron'ny Pan'ny Makgadikgadi [les pans de Makgadikgadi | the Makgadikgadi Pans], izay Pan midadasika indrindra eran'izao tontolo izao [FANAMARIHANA: tonòny hoe: mak radik radi, ny Pan dia koveta mitahiry sira voa-janahary vokatry ny fisintonan'ny ranomasina nisy tany aloha elabe tany]. Ity blaogy ity dia isan'ny fitaovana natao hiadiana amin'ny firongatry ny HIV/AIDs any Nata. Mandray anjara aminy avokoa na olona voan'ny SIDA, na vondrona tanora, na mpiasa ara-pahasalamana sy ara-tsosialy ary manilahila ny varavarana azahoan'ny mpandalo mahita izay fombafomba fiainan'ny mponina any ambanivohitr'i Afrika. Ampiasaina amin'ny fanangonam-bola ho fanohanana koa ity blaogy ity.
Mampalahelo ny voka-dratsin'ny SIDA teo amin'ny mponin'ity tanàna kely ity. Aty Afrika, dia i Bôtsoana no mitana ny laharana faharoa avo indrindra amin'ny tahan'ny fahavoazana SIDA. Ny taham-pirenena ankehitriny dia 37% ary mbola mihoatra an'io aza ny an'i Nata. 400 ireo kamboty navelan'ny fandalovan'ny aretina SIDA teo an-toerana. Ary ankehitriny, manakaiky ny 50%-n'ireo vehivavy bevohokaany Nata dia mitondra ny otrik'aretina HIV/SIDA avokoa. Soa ihany fa aty Bôtsoana dia misy fanafody maimaim-poana mahomby fanoherana ny Virosy. Manana tetik'asa manokana koa izahay izay mitandro ny tsy hamindran'ny reniny amin'ny zanany ny otrik'aretina, izany dia nampilatsaka ny taha ho 5% ankehitriny. Ity tranokala ity dia atolotra amin'ny anaran'ny mponin'i Nata tsy an-kanavaka, izay mbola mijoro sy mitolona amin'ity aretina mandoza ity na dia efa nisedra famiraviran'ny aretina aza.
Tany am-boalohany dia tsy mbola nanana blaogy ny tanànan'i Nata, indray andro anefa … :
Vokatry ny fandalovan'ny mpitetitany Jon Rawlinson, izay nandalo teo Nata diany ho any amin'ny vinanindranon'i Okavango, no niforonan'ny blaogy. Ny boky izay nitari-dàlana azy dia tsy nanisy soratra momba an'i Nata afatsy ny hoe « lavaka feno vovoka » ihany ka dia nikasa ny handalo fotsiny izy fa tsy nihevitra ny handany fotoana tao. Ny lahatra anefa dia nampihaona azy tamin'i Melody Jenkins izay Peace Corps Volunteer na mpiasa an-tsitrampo mampianatra y mponina izay tsara ho fantatra momba ny HIV/SIDA sady manana traikefa amin'ny fanentanana ny mpiara-monina hiray hina. Liana ny te hahalala bebe kokoa momba ny voka-dratsin'ny HIV/SIDA any an-toerana i Jon fa tsy te hianona fotsiny amin'ireo toerana mahazatra famangin'ny mpitsidika any Afrika. Rehefa avy nihaona tamin'ny mponina teo an-toerana sy nandre izay vonjy maika fanao hiadiana amin'ny fiitatry ny otrikaretina, tamin'ny alina iray monja dia resi-lahatra i Jon nanapa-kevitra ny hanampy. Hatramin'io fotoana io dia efa indroa miantoana izy izao no niverina tany Nata ary efa noraisin'ny Kgosi na mpanjaka any an-toerana sy ireo mpiasa rehetra mitolona amin'ny fihandraky ny HIV/SIDA. Isan'ny tombony hoan'i Nata ny asan'i Jon izay mpandraharaha amin'ny fampahalalam-baovao sady manana traikefa amin'ny fanamboarana tranokala. Ny faraha-niasan'i Jon sy i Melody dia nahavitany sarimihetsika mikasika ny aretina SIDA any Nata, mba ampahalalana an'izao tontolo izao. Amoron'ny reniranon'i Nata dia misy hazo Mokolane milahatra, nahita tanàna meva i Jon. Te hanao bebe kokoa noho ireo mpitsidika mpizahatany mody hafa am-ponenana i Jon, te hitondra mihoatra noho ireo sarin'Elefanta sy Zirafa. Nanolo-tena ary izy ny hanamboatra sy hikolokolo ny tranokala vaovao.
Ary taorian'ny adihevitra marobe momba ireo fanohanana izay mandeha any amin'ny fikambanana vaventy ary ankavitsiany ihany vao tena tafita any amin'ireo tena mila fanampiana, nanapak'hevitra i Jon sy i Melody fa hiezaka ny hanampy ireo mponin'i Nata amin'ny alàlan'ity tranokala ity.
Ny lahantsoratra tao amin'ny blaogy dia nosoratan'i Melody Jenkins, izay U.S. peace corps volunteer, i Martha Ramaditse, mponina eto Nata sy Andriamatoa Seloma Tiro, filohan'ny fikambanana Nata AIDS and Orphan Trust izay mitantana ireo fanohanana voaangona amin'ny alàlan'ity tranokala ity.
Ingahy Tiro kosa dia nitazona toerana manokana tamin'ny fiforonan'ny blaogy :
Tsy ho tanteraka ity tranokala ity raha tsy nizy no nalala-tànana. Hatrany am-pamoronana ity traonakala ity dia efa ingahy Tiro no nampindrana ny solosainany mba ahafahan'i Martha sy i Melody miblaogy. Izy ihany koa no nandoa izay lany rehetra tamin'ny tambanjotra aterineto sy namela anay hampiasa ny toerana ametrahana ity tranokala [serveur]. Navelany ho anay tanteraka ny biraony. Tamin'ny fanombohan'ity raharaha ity dia olona telo ihany no nanana tambanjotra aterineto tao an-tanàna. Ingahy Tiro dia lasa mpiray antoka tamin'ny fanorenana ity tranokala ity ary tsy tanteraka ho toy izao mihitsy izy ity raha tsy noho ny aminy. Ankehitriny izy dia mpiray antoka miaraka aminay sady isan'ny tompon'ny tranokala natavillage.org sy Nata village blog.
I John Rawlinson no namboatra sy nitantana ny blaogy.
Vao tsy ela dia nandrobaka ny fifaninanana the Peace Corps Information and Technology Contest ny blaogin'i Nata :
Andao kely ange hiverina amin'ny volana Janoary lasa teo, nandray anjara tamin'ny fifaninanana mikasika ny serasera ara-solosaina the Peace Corps Information and Technology Contest izahay. Tamin'ny volana Jona dia renay indray fa isan'ireo sivy voatazona izay hanao ny « lalao famaranana » izahay. Nambara taorian'izay fa isan'ireo telo voalohany izahay. Ireo telo voalohany ireo dia arantiranty ao amin'ny laharana volana Desambran'ny gazety Worldview Magazine sady ireo tetik'asa dia aparitak'ireo gazety rehetra avoaky ny fikambanana Peace Corps, na ny ivelany na ny anatiny. Nambara anay koa fa hisy lahantsoratra momba anay any amin'ny gazety the Peace Corps Times. Tianay ny hiarahaba ireo mpandresy hafa dia i Heidi Joseph avy any Zambìa sy ry Nicholas Cabiati sy Daniel Schier any Senegaly. Mahafaly anay koa ny mahatsikaritra fa asa atao aty Afrika avokoa ireo telo lohalaharana. Izany dia mampiseho fa ireo teknolojian'ny serasera dia efa any ay an-toerana ary tsy mitsaha-mitombo ny fampiasana azy. Isaoranay koa i Anthony Bloome izay nikarakara ny fifaninanana ao anivon'ny Peace Corps, sy ireo mpitsara niara-niasa taminy. Ilaina koa ny mamerina etoana fisaorana feno hoan'i Jon Rawlinson monina any Kanadà tamin'ny fanomezany ny tranokala hoan'ny tanànan'i Nata sy Ingahy Seloma Tiro tamin'ny fanohanany ara-bola tsy tapaka ity tetik'asa ity. Sitrakay koa ny maneho fankasitrahana ny [mpanjaka] Kgosi Makgesi izay nanararaotra ka namela ny tanànan'i Nata ho tanàna voalohany any Bôtsoana hanana ny tranokalany manokana.
Vokatry ny fandresena tamin'ny fifaninanana Peace Corps ICT, ny loka azon'ny Nata Village Blog dia famatsiana nahafahany nandeha nanatrika ny fivoriambe iraisam-pirenena mikasika ny serasera ara-solosaina izay natao tany Zeneva, any Soisa [Global Conference on ICT and Youth for Development, Geneva, Switzerland]. Izany fivoriambe izany dia ambany fikarakaran'ny Fivondronambe eran-tany hoan'ny serasera ara-solosaina sy ny fampandrosoana [GAID | The Global Alliance for ICT and Development] sy ny Fikambanana iraisam-pirenena hoan'ny serasera [ITU | International Telecommunication Union] :
Tena dingana lehibe tokoa izany miala avy aty amin'ny Elefanta aty ambanivohra ka handeha ho any Zeneva, any Soisa izany. Ireo mpiasa antsitram-pon'ny Peace Corps izay mpiray antoka tamin'ireo tasa telo nandresy dia nahazo famatsiana azahoany manatrika ny fivoriambe Global Forum on Youth and ICT for Development natao tany Zeneva, any Soisa. Fankasitrahana manokana no atolotra an'Ingahy Paul Jhin, talen'ny sampana Finiavana ao amin'ny birao foiben'ny Peace Corps any Washington D.K., any Amerika, satria avy aminy no nazahoana ireo famatsiana natolotry ny Firenena Mikambana [ONU] ahafahan'ireo mpiasa an-tsitrampo manao famelabelarana momba ireo asa ataony any afrika, eo anivon'ny tranobe fivoriana International Conference Center any Zeneva. Nanomboka ny 24 Septambra ny fivoriana ary ny 26 Septambra kosa no kendrena hatrehin'ireo mpiasa an-tsitrampo. Ity fivoriana ity dia tena fotoana tokana ahafahana mizara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ireo hery sy ireo sehatra mbola ilan'ny Nata fanampiana. Tena fotoana fohy dia fohy no nanomanana ity dia ity. Ary mahazendana ny halakin'ny fikarakarana nahafahan'ny Peace Corps sy ny Programan'ny Firenena Mikambana ho Fampandrososana [UNDP | United Nations Development Program] nanomana ireo tapakilan'ny dia ho any Zeneva. Sary marobe no ho alaina mba ahafahany mizara izany fotoana izany aminareo rehetra. Fankasitrahana eram-po no atolotra hoan-ndry Jon Rawlinson sy Seloma Tiro izay mpiray antoka aminay amin'ity asa ity. Roso toy ry zalahy a !! Saika hadinoko ny nilaza fa i Jon no nandrafitra ny lahantsoratra teo aloha iny ka dia miharihary aminareo hoe iza no tena raindahiny amin'ny lafiny teknika. Jon, misaotra amin'ny netezanao ho « guru » mpitarika anay tamin'ny lafiny teknika. Velom-panantenana izahay fa hitondra vokany betsaka hoan'i Nata ity dia iray ity. Ity lahantsoratra ity dia nalefa avy any Jô-Borga [Johannesburg], any Afrika Atsimo raha niandry am-paharetana mandritra ny adiny dimy izay hitohizan'ny dia aho.
Nandritra ny fivoriambe ny Famelabelarana arahina fifanakalozana izay notarihin'i Google [Google’s interactive presentation] dia nanome sehatra ity tantaran'ny blaogin'i Nata ity :
Ingahy Delany [solotenan'ny Google] izay hita amin'ny sary etsy ambony eo am-panondroana ny sarimihetsika momba an'i Nata, tanànan'ny fanantenana.
Sarotra ny mahita azy fa tazana eo ihany koa ny reniranon'i Nata. Tsy ho haiko ny hanambara aminareo ny reharehako sy ny fisem-poko raha nahita ny tanàna kelinay manangam-peo eto anivon'ity sehatra iraisam-pirenena ity. Ingahy Delany dia namporisika hatrany ny rehetra hanohy ny fampiasany ireo teknolojia izay eo am-pelatanany.
Taorian'ny fivoriambe dia nanoratra ny « miverina amin'ny tena fiainana andavan'andro » i Melody :
Manao akory izany hafaliako nisolotena ny tanànan'i Nata tany Zeneva, any Soisa. Antenainay fa iny fotoana iny dia hisarika olona marobe any amin'ny tranokala sy hiteraka fanampiana bebe kokoa hoan'ny mponin'i Nata. Olona avy any amin'ny vazantany maro no nanatrika ny famelabelarana nataonay ary fanantenany koa raha mihamarobe ireo tanàna hafa izay hanokatra ny tranokalany ahafahana mitondra fanampiana hoan'ireo mponina any an-dakira. Manakory izany fangariky ny toe-javatra any Zeneva sy aty Nata. Ity vehivavy amin'ny sary ambony ity dia mivarotra ireo akondro 20 cents mba ahafahany miaina any amin'ny toeram-pitanteram-bahoaka any Francistown. Raha ny any Zeneva kosa, ny kafe iray kopy dia salan'ny karaman'ny ankamaroan'ny mponina aty Nata. Mazava amin'izany fa tafaverina amin'ny asa andavan'andro indray ny aty.
Ireo fanomezana voaangona dia nampiasaina hanampiana ireo olona voan'ny SIDA, ireo zaza kamboty, ny dispanseran'ny tanàna, ny fanamboarana vakoky Mabogo, sns … Ankehitriny dia eo am-panohanana ara-bola ny fikarakarana fifaninanana lahantsoratra izao ry zareo :
Amin'ny alàlan'ny fanampiana nomenareo dia eo am-panomanana fifaninanana ara-lahantsoratra hoan'ny mpianatra taona fah-6 sy faha-7 amin'ny Sekoly Fanabeazana Fototra any Nata izahay. Ny lohahevitra hovoaboasina dia : Ahoana no fiantraikany na mety ho fiantrakan'ny SIDA amin'ny fiainako. Homena loka 60$ ny voalohany, 36$ ny faharoa, 18$ ny fahatelo, 9$ ny fahaefatra ary 5$ ny fahadimy. Omena maripakanhasitrahana kosa ireo eo anelanelan'ny toerana faha-enina ka hatramin'ny faha-folo. Tena vola be mihitsy izany eo imason'ireo ankizy, ka antenainay fa handrisika azy ireo hisaintsaina momba ny lohahevitra ka hitarika azy ireo hanao izay tsy hipariahan'ny aretina aminy izy ireo. Manakaiky ny isa 100 ireo lahantsoratra voaray ankehitriny ary amin'ny fety ny faran'ny taom-pianarana amin'ny faran'ity volana ity ho hambara ireo nandrobaka ny loka. Hapetraka eo amin'ny tranokala koa ny lahantsoratra sy ny sarin'ireo mpandresy mba ahafahanareo mahalala izay fomba fijerin'ny mpianatra any Nata io aretina [SIDA] io. Ezahinay hatrany ny mikaroka izay fomba mahomby indrindra ampiasana ny fanohananareo. Ireo 127$ dia nahafahanay nisarika ny mpianatry ny sekoly manontolo handinika ny momba ny fiantraikan'ny SIDA sady hanomezana valisoa ireompianatra amin'ny herim-pon'izy ireo. Fisaorana no atolotra ireo mpanome tsy an-kanavaka !! Fanamarihana, efatra andro no nolaniako handefasana ity lahantsoratra ity a !! Tena manimanina ny tambanjotra miridiridy sy ireo solosaina matotra aho k'ity.
Tamin'ny taon-dasa, ny blaogin'i Nata dia lohahevitra lahantsoratra tao amin'ny Typepad :
Ny blaogin'i Nata dia fitambarana herim-po izay ahitana sary, sy tantara ary sarimihetsika mahaliana. Ny blaogy dia mitatitra ireo asa mbola miandry sy ireo fandresena eza azon'ireo mponina, mpiasa ara-pahasalamana, ary mpanabe eo amin'ny fiatrehana ny firongatry ny SIDA… Iangaviako hianareo hitsidika io blaogy io. Izany dia hanome fotoana hoan'ireo mpanoratra sy ireo mpamaky ahafahany miaraka manatanteraka zava-dalina.
Ny lahanstoratra farany ao amin'ny blaogy dia mitatitra momba ny fahazahoan'ny dispanseran'i Nata ny aterineto :
Ahh haa ! Ohatry ny saika tsy ho tapitra mihitsy ny fiandrasana fa farany tafiditra aty amin'ny dispanseran'i Nata ihany ny aterineto. Io amin'ny sary ambony io mpampivelona [avy any Zimbaboe] eo am-pikarohana zavatra amin'ny aterineto. Ankehitriny dia mbola ny mpampivelona, ny dokotera-sefo sy ny farmasiana ihany no mahazo mampiasa azy, anefa manantena izahay fa hivelatra amin'nympiasa rehetra izany. Nambara taminay mantsy fa resaka fisoratana-anarana fotsiny izany. Ity mantsy dia fomba mahomby hoan'ireo mpiasa hahalala ireo traik'efa farany momba ny fitsaboana ireo marary. Ankehitriny dia efa misy fitaovana ahafahana mandefa imailaka sy fangatahana any amin'ny Tutume izay 193 km [120 miles] avy eto.
Tantaran'ny Botsoana farany
O rangahy ity a! firy andro no nanomananao io? mahery e! tena miaiky aho! tohizo e!
18 Oktobra 2007, 10:28
Soratra miverina: Liam-baovao ny Malagasy « malagasy
[…] misy fandraisana anjara fitenenana eto amin’ny sehatry ny fampahalalam-baovao ara-aterineto toy ny tanànan’i Nata any Afrika >>, mba ahafahany mizara ny andavan’androny amin’na sehatra iraisam-pirenena … […]
19 Oktobra 2007, 08:05
Aza mba manao ohatranan’io moa Ra-Jentl a !
Ny tena marina dia vao nahavita ny dikantenin’ilay lahantsoratra voalohany mikasika ny fihinana hena any Nata iny aho dia navoakany ity iray vaovao ity. Ohatry ny mba tsara ilay tantara ka satriko koa ny hampahalala azy dia raikitra tsy satry teo 😉 fa na izany na tsy izany … angamba tsy ampahafirin’ny efa nadikanao ireny ô ?
19 Oktobra 2007, 08:41